Kooxda Liverpool ayaa muujisay sida ay uga xun tahay dilka naxariis darada loo geystay… – Hagaag.com
Posted on 2 Juunyo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Dunida ayaa xiligan si weyn looga dareemayaa fal celinta ka dhalatay dilkii dalka Mareykanka sargaal katirsan booliiska dalkaasi u geystay George Floyd oo ahaa nin madow aan hubeysneyn xiliga la dilayay.
Banaan baxyo waa weyn oo looga soo horjeedo dilka ninkaasi ayaa ruxay magaalooyinka waa weyn ee dalka Mareykanka, waxaa sidoo kale banaan baxyo dilkaasi looga soo horjeedo ka dhaceen wadamo kale.
Kubada cagta kooxaha ciyaara iyo ciyaartoy badan ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin sida naxariis darada ah ee loo dilay George Floyd, waxa ayna kooxahaasi iyo ciyaartoyda qaar direen fariimo ay cadaalad ku dalbanayaan.
Kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield kasoo dirtay fariin, waxaana kooxdan inta wareeg ku sameeyay jilbaha dhulka dhigtay taageero u muujiyeen ololaha loogu magacdaray “Nolosha dadka madow qiimo ayay leedahay”
Xiddigaha Liverpool ayaa iyagana taageero u muujiyay mudaaharaadayaasha, iyadoo ciyaaryahan walba uu bogagiisa bulshada soo dhigay sawir ay kooxda iska qaaday iyagoo jilbaha dhulka dhigtay islamarkaana ku soo qoray: “Wadajir ayaa awood leh.
Waxaa sidoo kale jira ciyaartoy iyana ka ciyaara horyaalka Jarmalka ayaa fanaanado hoos gashi ah kusoo qoray cadaalad ha helo Goerge Floyd kadib goolal ay dhaliyeen kulamo ay ciyaarayeen.
Dilka sargaal cadaan ah oo katirsan booliiska Mareykanka u geystay Goerge Floyd ayaa caro badan dunida ka dhaliyay, waxaana muuqaalka dilkan oo sargaalka u adeegsaday jilibkiisa si weyn looga daawaday daafaha dunida.